EGGPLANT: KORITAANKA IYO DARYEELKA, HABABKA XAKAMAYNTA CAYAYAANKA - BEER CAGAARAN
Hababka xakamaynta cayayaanka ukunta cagaaran
Si aad u hesho goosashada hore iyo mid hodan ah ee eggplants, waxaa lagama maarmaan ah in lagu abuuro abuur ah on geedo waqtigii. Waqtiga qiyaasta - wax aan ka dambeyn badhtamaha Febraayo, iyada oo aan loo eegin nooca carrada. Dad badan ayaa ku beeri kara abuurka eggplant bisha Maarso - horraantii Abriil, iyadoo natiijada dhirta ay ubaxu kaliya dhamaadka xagaaga. Muddeynta daaqsinta ee eggplants waxay socotaa wax ka badan boqol maalmood.
Ka hor inta beeritaanka abuurka waxay u baahan yihiin inay hubiyaan biqilka. Si taas loo sameeyo, waa ku filan in la fuliyo nidaamkan soo socda: qaado tobanka miraha ee eggplants, u diyaari bacaha yaryar, kadibna biyo diirran u dhig afar iyo labaatan saacadood. Kadibna ka soo bax biyaha, bacaha ku rid baaquli iyo meel diirran, tusaale ahaan, ku dhow batoonka. Bacda qoyan. Shan maalmood gudahood waxaad fahmi doontaa in miraha kori doono ama aan. Xitaa haddii todoba ka mid ah shan iyo toban shinni ahi ay soo baxaan, waxay ku haboon yihiin beerashada.
Waxaan ilaalinaa abuurka ukunta ka soo cayayaanka
Ka hor inta beerto, miraha waa in sidoo kale lagu nadiifiyaa xalka adag ee manganese farmashiyaha nus saac. Ka dib markaa, raaci biyo, oo ku qoyso xal nafaqo. Si aad u hesho waxaad u baahan tahay inaad ku shubto hal shaaha oo ah ash qoryo hal litir oo biyo ah. Halkii halkii dambas, macdanta soodhada ah ee nitrate ama nitrophoska ayaa sameyn doona.
Abuurka waxaa lagu tuuraa xalka bacaha afar iyo labaatan saacadood. Heerkulka xalka waa inuusan ka hooseeynin +28 digrii. Thanks to daaweynta this, eggplants si dhakhso ah u kori doonaa, oo aad awoodi doontaa in aad u goosataan hore ka badan kuwa kale.
Hadda waxaad u baahan tahay inaad ka qaaddo bacaha abuurka xalka, ku rusheey biyaha waxoogaa biyo ah, ku rid saxan iyo ka bax laba maalmood meel diiran. Seeds waa inay qoyaan. Ka dib markii loo isticmaalo abuurka, waxay koraan shan ilaa lix maalmood.
Talooyin ku saabsan sida si habboon u koraan geedo eggplant.
Halkan fiiri talooyin ku saabsan sii kordhaya iyo daryeelidda yaanyada.
Khariidadda waxaa loogu talagalay beerista khudradda dhul furan //rusfermer.net/ogorod/plodovye-ovoshhi/vyrashhivanie-v-otkrytom-gunte
Si aad u qallajisid abuurka waxa ay saameeyn karaan heerkulka ka soo horjeeda.
Tani waa tan sidan oo kale: Abuurka waxaa la geliyaa qaboojiyaha muddo laba maalmood ah, heerkulka aan ka badnayn shan digrii, ka dibna waxay ku jiraan meel diirran heerkulkii + 20 maalintii, kadibna mar labaad qaboojiyaha muddo laba maalmood ah. Laga soo bilaabo qaboojiyaha, miraha isla markiiba lagu beeray. Xasuuso in miraha ku jira bacaha had iyo jeer waa in la qoyaan.
Ka Hortagga Daaweynta Eggplant iyo Ka Hortagga Dakhliga
Waxaad ku kori kartaa eggplant carrada kala duwan. Waa kuwan qaar ka mid ah xeryaha aad isticmaali kartid:
Laba qaybood oo ah digada iyo hal qayb oo dhul ah;
Qeyb ka mid ah balka, laba qaybood oo ah peat iyo qadar isku mid ah humus;
Laba qaybood oo ah humus iyo peat;
Laba qaybood oo ka mid ah dhulka iyo saddex qaybood oo humus ah;
Habka ugu haboon waa inaad soo iibsatid ciidda diyaar-u-noolaanshaha ee dukaanka.
Hadda waxaad ku dari kartaa hal qaado oo qoryo qoryo ah iyo superphosphate mid ka mid ah isku darka ciidda la doortay, si fiican u qaso kuna daro sanduuqa. Ka fogow fogaanta ugu yaraan laba sentimitir oo ciid ah ilaa top of sanduuqa, si marka waraabiyo ciidda aan la dhaqay.
Isku darida ciidda waa in lagu shubo sanduuqa oo leh sideed centimeter. Dabadeedna u dhig, adoo is dejiya isla markaana ka dhiga meel fog oo shan sentimitir ah. Ha iloobin inaad biyaha u waraabiso. Ku rid miraha godka laba centimitir midba midka kale, ilaa qiyaastii hal mitir iyo badh. Ka dibna buuxi godadka, wax yarna ciidda carrada.
Sanduuqa leh dalagyada ayaa ku haray laba maalmood meel diiran. Laba maalmood ka dib, ciidda waxaa lagu waraabiyaa saddex qaado oo biyo ah oo ku yaal dhar kasta.
Sidaa darteed geedo si dhaqso ah u soo baxday.
Laga bilaabo shan ilaa lix maalmood, geedo waa in la kormeero, isla marka ay koraan, sanduuqa waa in loo wareejiyaa meesha qorraxda ee guriga.
Halkaas waa inay istaagaan illaa toddobaad si ay xididadoodu u sii xoogaystaan, ka dib markaa heerkulku waa la kicin karaa ilaa +23 digrii inta lagu jiro maalinta iyo +19 digrii ee cimilada daruurta leh.
Geedo waa inay ku jirtaa sanduuqa ilaa ay bixiyaan ubaxyada ugu horreeya ee dhabta ah. Waxay badanaa qaadataa illaa bil. Inta lagu jiro waqtigan, geedo u baahan yihiin in la waraabiyo toddobaadkii hal mar. Biyaha-dheeraadka ah maaha mid u qalma, haddii kale halista infakshanka dhirta leh lugta madow ayaa sarreeya.
Heerkulka biyaha waa inuu noqdaa +25 digrii. Biyaha ka hor waxay u baahan yihiin inay difaacaan. Dharka ugu sarreeya ka hor inta aadan dhoofinta dhirta u gelin weel kale waxaa la sameeyaa hal mar oo ka mid ah saamiga: toban litir oo biyo ah oo midba la beerto oo ka mid ah xalinta nalalka kalsiyum.
Laba maalmood kadib, sanduuqyada waa in loo rogaa daaqada si ay iftiin badan u timaaddo dhirta.
Ka dib markii laba caleemo oo dhab ah laga arkay dhulka, eggplants mustaqbalka diyaar u yihiin transplanting. Geedo waqtigan waa mid aad u fudud in dib loo dhigo inta lagu jiro xilliga muuqaalka cotyledon caleemaha.
Ka hor intaadan bilaabin habka qaadista, geedo saddex saacadood ka hor inta aan la waraabin. Laguma talin in geedo qalalan laga helo geedo qalalan, tan iyo dhammaan ciidda ka imanaya xididdada.
Geedo lagu beerin karaa bacaha caanaha, dheryaha peat, koobabka caaga ah iwm. Cabbirka weelka waa inuu ahaadaa 10x10 cm, waxaa ka buuxsamey isku dar ah ciidda, kaas oo loo adeegsaday beeridda miraha. Markaas waxaa lagu waraabiyaa heerka: 10 litir oo biyo ah hal galaas oo ah mullein dareere ah ama hal qaado oo ah HOL.
Ka dib markii dheryayadu ka buuxsamaan iskudhafka nafaqada, ka dhig bartamaha fossa, oo dhirta u wareeji waraaqaha ugu horreeya ee asliga ah.
Geedaha dheryaha ayaa la dhigaa daaqada, halka ay ku daboolaan dhowr maalmood oo wargeys ah si loo abuuro shuruudo iftiin dhexdhexaad ah. Daryeelidda geedo - waa quudinta, waraabinta, adkeynta iyo u hoggaansanaanta nidaamka heerkulka.
Biyaha carrada si joogto ah. Marka ugu horeysa toddobaadkii waa lagama maarmaan inaad ku shubto dhammaan ciidda Sidaa daraadeed biyuhu ma joogaan dheriga, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo godad hoose. Haddii aad ku shubtid biyo badan, dhirta ayaa joojin karta koritaanka. Ku waraabi biyo biyo ah, lix maalmood ka dib markaad transplanting.
Isku day inaad biyo ku quudiso dhirta isla wakhtigaas. Tusaale ahaan, jebiso ukunada iyo buuxi saddex litir oo biyo kulul ah. Ha illoobin lix maalmood. Walwal xalka maalin walba. Marka ay diyaar tahay, ku cadaadi cheesecloth iyo biyo isaga. Habkaas oo kale ayaa lagu celin karaa iyadoo la isticmaalayo qashinka shaaha sakhradda.
Haddii aad dareentid in geedi socodka kobaca uu si tartiib tartiib ah u socdo, caleemaha warshaduna waxay noqdaan cagaar, ka dibna u diyaari halbeeggan soo socda: hal koob oo mullein ah iyo shaaha shaaha ah ee HOL ku jirta toban litir oo biyo ah. Quudinta ukunta.
Laba jeer inta lagu jiro Bisaylkiisa ee eggplants, ku shub ash ciir yar oo ciidda. Saddex dherer oo ku filan hal shaaha. Ku dar shaaha si taxadar leh si aysan u dhicin dhirta.
Si loo dhirta dhirta si fiican u dego, isla markiiba ka dib soo qaado, siiyaan hawada diiran ee qolka.
Pumpkin Goobidda iyo daryeelka waa talooyin wax ku ool ah.
Sida loo koro qajaarka guriga //rusfermer.net/ogorod/plodovye-ovoshhi/vyrashhivanie-v-otkrytom-grunte/pravilnoe-vyrashhivanie-ogurtsov-v-otkrytom-grunte.html
Beerto geedo qajaar ah oo dhulka ku furan
Qoob-ka-beddelka beerista ee baahida dhulka u furan marka geedo ay siin doonaan siddeed ilaa laba caleemo. Waa inay sidoo kale leedahay nidaam xidid adag iyo burooyinkeeda la sameeyay. Haddii eggplants lagu kori karaa in lagu koriyo, ka dibna ka sameeyaan bartamaha May, malaha wax yar ka hor.
Geedo ayaa lagu beeray dhul furan horraantii Juun. Sariiraha waa in si ammaan ah loo daboolaa foornada. Ka hor inta beerto ciidda ee dheriga waa in la waraabiyaa. Tani waa lagama maarmaan si markaa buro qoyan oo dhulku ay ku yaalaan xididada dhirta.
Xasuuso: laba todobaad ka hor inta aadan beerin berrin bannaan, geedo u baahan yihiin in la adkeeyo. Si tan loo sameeyo, u qaad hawada furan, heerkulka aan ka yarayn 10 ° C, isla markaana isla markaa ka ilaali qoraxda iyo dabaysha. Maalin kasta, kordhiyaan waqtiga geedo ku jira hawada u furan.
Cudurada ugu weyn ee geedo eggplant
Si looga hortago geerida lama huraanka ah ee geedka, waxaa lagama maarmaan ah in la helo faham fiican oo ku saabsan sababaha cudurka, iyo sidoo kale in la ogaado sifooyinka kala duwan.
Cudurada ugu caamsan ee saameynaya eggplants waa lugta madow. Sababta oo dhan - fungus, taas oo sababa madow qoorta xididka geedka. Haddii aadan qaadan tallaabooyinka degdegga ah, cudurku wuxuu dabooli doonaa ubaxa oo dhan, waxana uu si tartiib tartiib ah u jajabinayaa. Meelaha qoyaanku badan yahay cudurku wuxuu ku faafaa xaalad ah saacado.
Waa suurtogal in la daaweeyo dhirta ka dib dhaawac lugta ah oo lugta ah, laakiin cudurka waa laga hortagi karaa.
Caleemaha cudurka qaba waa in si dhakhso ah looga saaraa, oo ciidda meeshan waa in lagu nadiifiyaa lakabka. Geedo waa in si joogto ah loo yareeyo. Kuwa ugu khatarsan waa cudurada bakteeriyada, sida "Bakteeriyada madow". Geedka gebi ahaanba wuu ka jiraa.
Waxaa ku daboolan dhibco madow, oo leh xadka huruudka ah dhinacyada. Dhibcuhu waxay bilaabaan inay koraan ilaa geedka oo dhan la daboolay. Haddii tani dhacdo, ka dibna eggplants ma ku haboon tahay cuntada. Si looga hortago dhacdada cudurka, ku buufin dhirta leh daroogada bakteeriyada "Barrier" - saddex kiiloodba halkii litir oo biyo ah.
Cudurada kale waxaa ka mid ah:
Cayayaanka seedling ee eggplant
Cayayaanka ugu caansan ee eggplants waa Colorado baradho baradho. Oo isna wuxuu jecel yahay in ka badan caws la baradho.
Midka labaad ee ugu caansan waa caarada caarada. Burburka laga bilaabo hawshiisa wuxuu ku xiran yahay godad yar. Cayayaanka Spider si gebi ahaanba u nuugaan dhammaan casiir ka soo geedka, haddii aan tallaabo qaadin. Laba ama saddex toddobaad ka dib, farac cusub oo cayayaanka ayaa soo baxaya.
Wuxuu jecel yahay eggplant iyo aphid. Waxay sidoo kale nuugaan juuska geedka. Si looga hortago dhacdadeeda, waxaa lagama maarmaan ah inta lagu jiro marxaladda ubaxa si loo buufiyo ukunta leh diyaargarow kiimiko ah sida: "Aktara" ama "karbofos". Waxay dhab ahaantii ku habboon yihiin burburinta cayayaanka oo dhan.
Ogow markii wakhtiga saxda ah ee lagu beerayo geedo midho leh, maxay dhakhso u bilaabi lahaayeen oo ay caleemaha ugu horreeya siinayaan.
Dhamaan wixii aadan ogeyn oo ku saabsan rugta qalab, akhri maqaalkeena for beekeepers - bilowga halkan.
Laakiin si ay uga takhalusaan slugs qaniinyo, waxaa lagama maarmaan ah in la haynin nadiifinta, pollinate grooves leh lime cusub iyo si joogto ah loo dabciyo ciidda.